XOG: Kooxda Real Madrid oo durba bidhaansanaysa racii bedeli lahaa BBC! – Gool FM
Xiddigaha ay far muuqdeen!
(Madrid) 17 Jan 2018 – Kooxda Real Madrid ayaa maanka ku haysa inay kacaamiso safkeeda, jeer ay isa soo tarayaan wararka sheegaya in ay soo dhamaanayaan waayihii Cristiano Ronaldo, haatan waxaa laacibiinta socota (waloow ay tahay sheeko cusub) lagu soo daray Bale iyo Benzema, si loogu gogol xaaro xiddigaha cusub ee soo socda.
Sida uu sheegayo warsidaha AS, Florentino Perez ayaa guddoonsadey in uu ogolaado iibka Ronaldo, sababtuna waa naadiga Merengue oo doonaya dhiig cusub, jeer uu CR7 uusan diyaar u ahayn inuu dhimo mushaarkiisa qaaliga ah oo sanadkii ah 21 milyan oo euro ilaa 2021 (kaasoo bilyan lagu fasiqi karo).
Waxaa kale oo la sheegayaa in CR7 oo ka masayray qandaraas kordhinta Messi oo sanadkii helaya 100 milyan oo euro oo aan saafi ahayn (gross), ay dhalisay inuu u tegey Perez oo uu ka codsaday in mushaharka loo kordhiyo, balse wuu ka cuslaystay iyadoo la sheegayo inuu xitaa wacay Jorge Mendes – wakiilka Ronaldo – oo uu ka codsaday inuu koox cusub soo helo, isagoo ka fikiraya inuu heli karo fursad la mid ah Neymar, oo dahab loogu qubeeyay markii uu tegey Paris.
Sida ay faafinayso BBC iyo sidoo kale MarcaRea, kooxda Real ayaa durba u diyaar ah duni aysan u joogin Ronaldo, Bale iyo Benzema, iyadoo ka fikiraysa Neymar, Hazard iyo Icardi, iyadoo ay dookh 2-aad yihiin Lewandowski iyo Kane haddii iska caabbin lagala kulmo naadiyada haysta laacibiintan.
Waa arrin adag marka ay timaaddo lacagta ay ku iman karaan laacibiintan oo guud ahaan ku dhowaanaysa 1 bilyan marka wax kasta oo uu mushaharku ku jiro la xeeriyo, balse ma aha wax mustaxiil ah haddii aad si wacan u taqaanno Florentino Perez.
BADBAADI GAROON BILYAN AH: Garoonka Chelsea oo lagusoo oogey dacwad la yaab leh!